လာလီဂါရွှေဖိနပ်ဆုကို ဘာလို့ ပီချီချီဆုလို့ ခေါ်တာလဲ…? ပီချီချီဆိုတာ ဘယ်သူလဲ…? – MySport Myanmar
လာလီဂါရွှေဖိနပ်ဆုကို ဘာလို့ ပီချီချီဆုလို့ ခေါ်တာလဲ…? ပီချီချီဆိုတာ ဘယ်သူလဲ…?
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျ…။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို စပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစားသမားတွေကို ပေးအပ်လေ့ ရှိတဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆု (သို့မဟုတ်) ပီချီချီဆု အကြောင်း ကို တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ လာလီဂါရဲ့ဂိုးသွင်းဘုရင်ဆု ဖြစ်တဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုအကြောင်း ကို ပြောရင် ချန်ထားလို့ မရတာကတော့ ပီချီချီလို့ နာမည်ပြောင်ရထားတဲ့ စပိန်တိုက်စစ်မှူး မော်ရီနိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီချီချီလို့ နာမည်ပြောင် ရထားတဲ့ မော်ရီနိုဟာ ဘီလ်ဘာအိုအသင်းလို့ လူသိများတဲ့ Athletic Clubရဲ့ ရှေ့တန်း ကစားသမားဖြစ်ပြီး ဘီလ်ဘာအိုအသင်းရဲ့ ရွှေခေတ် လို့ ပြောလို့ရမယ့် ၁၉၁၁ခုနှစ်ကနေ ၁၉၂၁ခုနှစ် ကြားထဲမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းခြေစွမ်းကို ပြသခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Laliga.com
မော်ရီနို (သို့) ပီချီချီဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှု အပိုင်းမှာ အားကောင်းသူ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အသင်း မရှိခဲ့ပဲ ဘီလ်ဘာအို အသင်းအတွက် ၈၉ပွဲ ကစားခဲ့ရာမှာ ၈၃ဂိုး သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဘီလ်ဘာအိုအသင်းနဲ့အတူ စပိန်ကိုပါဒယ်ရေးဖလားကိုလည်း ၁၉၁၄ ၊ ၁၉၁၅ ၊ ၁၉၁၆နဲ့ ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွေမှာ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မော်ရီနိုဟာ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှာ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကို ကိုယ်စားပြုကာ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲမှာ သူနဲ့အတူ စပိန်အသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သူကတော့ ဂိုးသမား ဇာမိုရာ ဖြစ်ပြီး ဇာမိုရာဟာဆိုရင် မော်ရီနိုလိုပဲ လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆုကို သူ့ရဲ့နာမည်ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၉၂၀ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ မှာတော့ မော်ရီနိုနဲ့ ဇာမိုရာတို့ဟာ စပိန်အသင်းကို ငွေတံဆိပ်ဆု ရရှိအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဇာမိုရာဟာ ဂိုးသမား တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်လက် ကစားခဲ့ပေမယ့် မော်ရီနို (ခေါ်) ပီပီချီကတော့ ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာပဲ ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူခဲ့ပြီး ဒိုင်လူကြီးဘဝကို ကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာတော့ မော်ရီနိုဟာ တိုက်ဖွိုက်ရောဂါကို ခံစားရကာ အပြင်းဖျားပြီး ရုတ်တရတ် သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ မော်ရီနိုဟာ အသက်၂၉နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး သူ့အတွက် စပိန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးဟာ နှမြောတသ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မော်ရီနိုရဲ့ အသင်းဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဘာအိုအသင်းဟာ မော်ရီနိုကို အောက်မေ့ သတိရသောအားဖြင့် ၁၉၂၆ခုနှစ် မှာ မော်ရီနိုရဲ့ ရုပ်ထုကို သူတို့ရဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ တည်ဆောက်ကာ မော်ရီနိုကို ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
မော်ရီနို (ခေါ်) ပီချီချီဟာ ဘီလ်ဘာအိုအသင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ဘီလ်ဘာအို အသင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘောလုံးကွင်းကို ပရိသတ် ၅၃၀၀၀ဆန့် ဘောလုံးကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ချိန်မှာတောင် ပီချီချီရဲ့ ရုပ်ထုကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မလုပ်ခဲ့ပဲ မူလနေရာမှာပဲ ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကစားသမားတွေ ကွင်းအတွင်း သို့ ဝင်လာရာ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ပီချီချီရဲ့ ရုပ်ထုကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာတော့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး အားကစားသတင်းဌာနတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မာကာ သတင်းဌာနာဟာ လာလီဂါပြိုင်ပွဲအတွက် ရွှေဖိနပ်ဆုကို စတင် ဆုချီးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပြီး အဆိုပါဆုကိုလည်း ပီချီချီကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပီချီချီဆုအဖြစ် နာမည် ပေးအပ်မယ်လို့လည်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ၁၉၅၃ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လာလီဂါ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုကို ပီချီချီဆု ဟုသာ ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ပီချီချီဆုကို အများဆုံး ရယူထားနိုင်တဲ့ ကစားသမားနှစ်ဦး ရှိပြီး အဆိုပါနှစ်ဦးဟာ စပိန်တိုက်စစ်မှူး ဇာရာနဲ့ နာမည်ကျော် အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ပီချီချီဆုကို ခြောက်ကြိမ်စီ ရယူထားနိုင်ကြပါတယ်။ ကဲ ဒါကတော့ ပီချီချီဆုရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ပီချီချီဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ၊ ဘယ်လို ကစားသမားမျိုးလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း ကျေနပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။
MySport Myanmar2020-05-15T20:06:42+06:30May 15th, 2020|Football, La Liga, World|